Ny fiarahana raha tsy misy ny finday avo lenta? Dia ny iraisam-pirenena ny fivoriana azo atao raha tsy misy ny finday avo lenta - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny fiarahana raha tsy misy ny finday avo lenta? Dia ny iraisam-pirenena ny fivoriana azo atao raha tsy misy ny finday avo lenta
Izy no nanao izany dimy ora taty aoriana
Raha ny arivo taona dia be noho ny finday avo lenta mba hanangana sy hitazona ny fifandraisana tantaram-pitiavana, dia afaka manao ny tantaram-pitiavana miroborobo tsy misy azy ireo? Roa Nokia finday (Eny, ireo tsy Whatsapp sy ny tambajotra sosialy), ary roa voaloa vola mialoha karatra SIM, ny tsirairay miaraka amin'ny $fetraNandritra ny iray volana, ny fifandraisana rehetra tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny Nokia finday, amin'ny fampiasana ny fomba manaraka ireto ny fanapahana voafetra ny karatra SIM. Izany dia midika fa ny SMS sakafo (izay mitentina dimy cents ny tsirairay) ary sary (nalefan'ny MMS, izay fandaniana avy amin'ny iray amin'ny maro cents ny tsirairay ny fotoana, arakaraka ny haben'ny ny sary). Taorian'ny andro iray monja ny fanandramana, isika dia miatrika olana. Naharay SMS hafatra avy George teo amin'ny iPhone nilaza fa ny Nokia finday dia tsy miasa araka ny tokony ho izy. Avy hatrany aho dia nandefa hafatra:"ENTO AHO, tsy MANINONA ny MIRESAKA ANAKA AHY amin'ny finday ity, tsy MANINONA ny BARGET AHY". Aho nanao fandaharana vaovao ho an'ny finday azo naniraka tany aminy, ary izy no azo antoka hitondra izany miaraka aminy amin'ny mitatao vovonana ny andro manaraka. Rehefa tonga aho, ary nandeha ny tolakandro, nieritreritra aho fa ny finday efa nafahana soa aman-tsara. Izaho no nanohitra ny fakam-panahy mba handefa hafatra an-TSORATRA ny finday avo lenta sy ny tsy naniraka azy ny hafatra amin'ny alalan'ny Nokia mba hijery raha toa ka efa nahazo ny telefaonina. Nahatsapa tena sembana - miaraka amin'ny finday avo lenta, tsy dia zatra nahazo valiny avy hatrany avy hatrany. Amin'ity tranga ity, dia tsy nanana safidy afa-tsy ny mipetraka sy miandry Giorgio mba hanome fanavaozam-baovao. Tamin'izay fotoana izay, dia niezaka mba hanelingelina ny tenako avy mieritreritra momba ny antony. Nandeha ho antoandro, ary avy eo izy dia nihaona tamin'ny namana, fa ao am-poko ny fo aho miandry ny finday ny peratra ary lazao ahy fa hafatra efa tonga. George efa vitsy kokoa ny olana noho izay efa nandritra ny tetezamita, noho ny unintelligent finday.
Tsy tena tsara mpanoratra, ary izy dia aleony tsy miankina resaka."Ny lahatsoratra, sarotra ny mahita ny fihetseham-po ao ambadiky ny izany,"hoy izy."Ka amiko, izany dia tsy ny endrika tsara indrindra ny serasera.
Kely aho lany andro, ary izy ireo no tia ny manana fotoana tsara amin'ny olona aho Mampiaraka."Etsy ankilany, dia nahatsapa ny fahasamihafana mazava kokoa.
Voalohany indrindra, ny toetra amam-panahy fetra efa nanao lava resaka amin'ny alalan'ny SMS saika tsy ho vita.
Izaho no hiady ho azy io mba hahita ny fomba ny andro, dia, ary nomena ny asa maha-mpanoratra, dia afaka milaza aho fa tsy azoko tsara indrindra amin'ny teny fetra. Instagram tsy maintsy ampiasaina indrindra fampiharana teo ny finday (afa-tsy ny Whatsapp), ary matetika aho no adaladala horonan-taratasy ny alalan ny sakafo fotsiny handalo ny fotoana. Rehefa daty ny olona iray, dia matetika manaraka ny mombamomba azy mba hahita izay mahatonga azy mifidy, ny fomba hihinana, ny Fialam-boly, ary mazava ho azy sarin'ireo ny taloha vehivavy sakaizany. Handeha hiverina ho fototra amin'ny Nokia dia midika fa tsy misy izany dia izay azo atao, ary rehefa nanontany ahy ny namako hoe inona George toa, na dia tsy manana tokan-tena-sary azy mba hampiseho azy ireo. Lava, hoy izy, tsy manan-kery. Manify? Afa-tsy ny fanelingelenana, dia efa nianatra ny lesona vitsivitsy ao Mampiaraka. Raha tsy misy ny tsindry avy amin'ny fitazonana tsy mitsahatra mikoriana ny cyber fifandraisana, nahatsapa aho fa tsy afaka miadana ny dingana, ary niandry mba hihaona amin'ny George mba hianatra bebe kokoa momba azy amin'ny olona.
Hay fa nampidirina ny bateria diso sy tsy mazava
Ny zava-misy fa rehefa manoratra lahatsoratra iray, dia mamorona diso dikany ny fifandraisana akaiky - mety efa nihaona tamin'ny olon-kafa. ny olona iray dia tsy mihoatra ny fotoana vitsivitsy, fa ny finday avo lenta (izay mamela anao hijanona eo amin'ny fifandraisana tsy tapaka tsy ho varimbariana avy amin'ny asa ny olona iray hafa) ho tsapanao kokoa ho an'ny olona ianao ka mijery. Nianatra aho fa sarobidy firafitry indray, izay midika hoe tsy mandany fotoana be dia be, raha ny manaraka lahatsoratra tonga aho, ary vonjeo sy handalina ny resaka ho an'ny mifanatri-tava fivoriana.
Amin'izay heviny izay, niezaka aho mba hamporisihana bebe kokoa ny marina fifandraisana amin'ny George, na raha toa isika ka tsy mihaona amin'ny olona.
Ary ny izy, kosa, dia nanao toy izany koa. Nanana olana indray fa tsy maintsy tsy tapaka ny fifaliana, sy iray alina aho, dia nandefa sms ireo George mba aoka ho fantatrareo fa izaho efa nandray ny x-ray vokatra. Dia gaga aho raha izy no niantso ahy ary nanontany hoe: manao ahoana aho, na dia ny namako akaiky, izay tsy misy intsony ao amin'ny taona Casappa. George antso an-tariby dia nampiseho fa izy no mikarakara azy. Aho nanadino ny momba ny fahombiazan'ny ny kely fihetsika - sady amin'izay koa, ireo andro aho miteny afa-tsy ho an'ireo izay tsy dia mahalala izany.
ho an'ny matihanina ny antony na ny mangataka ny hampidirana ny namana, miantso isika rehefa misy tara mba hanomezana fahafaham-po ahy.
Fa tamin'io fotoana io ny resaka, rehefa isika no miresaka, mihomehy, ary manaiky ny tsirairay ho afaka ny hihaino ny olona iray dia feo sy ny feo feon-tsapako be akaiky kokoa noho ny andian-hafatra an-tsoratra. Herinandro vitsivitsy taty aoriana, George nampitandrina ahy fa izany dia ho saina fotoana ho azy, izay midika fa ny sms dia miadana be. Tonga saina aho fa izy dia eo ambany ny adin-tsaina, ary izy nihevitra fa momba izay atao mba hamporisihana azy. Eo ambany na inona na inona toe-javatra hafa, tsy mety mandefa azy faly text messages na ny fanomezam-pahasoavana mba hanao azy ho sambatra, na angamba buy ny fanomezana ny Internet sy mandefa an-trano mba ho tsara tarehy mahagaga. Fa satria izy dia tena sahirana ary izany dia tsy mety ny fivarotana an-tserasera amin'ny ny Nokia an-tariby, tsy maintsy mahazo famoronana.
Nanapa-kevitra ny hanao zavatra aho tsy nataony teo aloha: mandehana any an-tranony izy, ary manoratra ho azy ny gazety, ary ny sasany-mba hahazoana ny fiainana.
Talohan'ny nandehanako dia confided amin'ny namana iray ary nilaza taminy ny zavatra ho ataoko."Mihevitra aho Stalker.Tsy nilavo lefona."Izay mamaly ny varavarana izao andro izao?"Tsara, izay nataon'ny olona rehefa niezaka ny fitsarana ny olona iray taona lasa izay, ary izany dia ny mamy fihetsika,"hoy izy, nankahery ahy ny hanao izany. Ka izany no tsara ny zavatra nataoko. Ny tany am-boalohany ny drafitra dia handao ny zavatra izay niraikitra tao ny mailbox. Izaho hoy aho efa ho vita ny asa fitoriana ka dia nanapa-kevitra ny hitandrina George fanomezana mora raisina. Indrisy, tsy manana ny kanto ny lalan-kivoahana. Ny reniny dia nahita ahy nirenireny manodidina ny trano na dia gaga ny ray, izay akanjo ambony. Raha fintinina, George dia niantso izy, ary izaho manokana dia nanolotra ny fanomezana. Dia nitodika tany mena rehefa clumsily nilaza taminy fa tsy mety mila fiara tsy mataho-dalana. Raha toa izy ka nihevitra fa ny taona voalohany, dia azo antoka fa tsy show up. Na dia tsy azoko ny mpisolovava, izay matetika no mampiseho ny eo am-baravarana ny mampilaza, traikefa naneho ahy fa tsy voatery hampiasa misy andinin-teny mampiseho ny fitiavana. Izaho mety efa nanao ezaka bebe kokoa ho fandrindrana sy manao ny zavatra madinika izay mahatonga ny fifandraisana bebe kokoa ny tantaram-pitiavana. Ny ezaka dia ny valisoa rehefa izy no naniraka ahy ny hafatra hoe izaho no"mamy sy oroka."Nandritra izany fotoana izany, amin'ny alalan'ny filomanosana aho, dia nihaona tamin'ny namana vaovao izay nitondra azy aho, Andriamatoa Giuseppe Reis, ny SPIRA raibeko izay mbola velona. nandritra ny sakafo atoandro, nangataka azy aho mba lazao ahy izay dia toy ny fony izy sy ny vadiny nihaona."Izaho miteny aminao, dia nandray ny taona iray manontolo ny fivoriana alohan'ny izahay dia niditra ny tanana,"hoy izy."Dia nahita azy ireo aho, indray mandeha eo amin'ny faran'ny herinandro. Tiako ny miantso azy ary anontanio ny azy avy, fa ny rehetra,"hoy izy nanohy. Sy ny fomba ela izany naka azy hanao ireo antso ireo ny herinandro lasa teo, dia nisy ny fanadihadiana."Kely. Ara-bakiteny isika, napetraka ny daty sy ny fotoana ny fivoriana, ary avy eo dia nahantony."Tsy mora izany,"hoy izy."Ny fitsaharan' ny fotoana, dia nanao izay tiako indrindra. Aho te ho any any ho any, hihaona amin'ny vahoaka, hanao ny zavatra."Fa nampieritreritra ahy.
Tsy maintsy miandry taona iray manontolo mba hanao olona iray tanana, fa Mr.
Guo ny teny dia mbola marina. Ka ny finday avo lenta dia manome fahafahana antsika mba ho tena haingana sy mahomby (izay tena nanao ny fiainana mora kokoa), fa angamba raha ny olon-tiany, fa tsy ratsy raha toa ianao zokiny kely sy manam-potoana ianao hihaona olona iray. Fa tsy mijery ny lamba izay manana hery anaty fitiavana liana na tafahoatra rehefa izany dia mamaly ahy ny andinin-teny, dia afaka manorina ny fialam-boly fotsiny, hanao ny zavatra, ary ho afa-po. Ary rehefa mahita ny olona iray, dia afaka lazao ahy bebe kokoa momba ny zavatra nataoko, ary tena afaka manisa ny fotoana lany miara.
Oh, ary raha manontany tena ianao hoe, George sy izaho dia mbola nandefa hafatra amin ny Nokia finday, eny, farafaharatsiny mandra ny efa voaloa vola mialoha karatra SIM lany ny vola.
Hahazo ny lamaody farany, fiantsenana, ny hatsaran-tarehy, ny fomba fiainana, ny fifandraisana sy ny VIP fanasana mba lamaody ny zava-nitranga, mpiara-miasa toerana ambony sy ny fahafahana handresy lehibe loka rehefa nisoratra anarana.
Ny fifandraisana fivoriana
Γνωρίστε Γερμανία για σοβαρές σχέσεις και το γάμο
ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana raha tsy misy fepetra video Mampiaraka izao tontolo izao Fiarahana tsy misy sary maimaim-poana Fiarahana tsy misy fisoratana anarana video internet aterineto tsy misy fisoratana anarana video internet tsy misy fisoratana anarana chatroulette mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana video Mampiaraka sexy video Fiarahana tamin'ny tovovavy iray maimaim-poana